अमितालाई कसले दिन्छ न्याय ? « Loktantrapost
अमितालाई कसले दिन्छ न्याय ?
२६ असार २०७५, मंगलवार १३:३७
आदरणीय महिला नेतृहरु,
केही दिनयता झापामा कतै श्रीमानले तीनतला माथिबाट लडाएर घाइते बनाएकी महिला न्यायको याचना गरिरहेकी छिन् । कतै शिक्षकद्वारा नै स्कुलमा दुव्र्यवहार भएँ भन्दै साना बालिकाहरु प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिइरहेका छन् । कतै श्रीमान परस्त्रीसँग लागेर घरमा दिने शारीरिक र मानसिक यातना खप्न नसकेर महिलाहरु न्यायको भीख मागिरहेका घटनाहरु झापामा पछिल्लो समय प्रशस्त सुनिएका, देखिएका र पढिएका छन् ।
तर, झापा अर्जुनधारामा ससुराको मृत्युको खबरपछि घर पुगेकी धुलाबारीकी अस्मिता गौतमलाई आफ्नै भान्जाले लात्ती लात्तीले भकुरेको र श्रीमानलगायत नन्द आमाजुले दुव्र्यवहार गरेको समाचार स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । उनी हाल धुलाबारीस्थित हिमालयन स्कुल छेउमा रहेको आफ्नै डेरामा मृतक ससुराको काजकरिया गरिरहेकी छिन् । त्यो घटना पश्चात गौतम परिवारलाई स्थानीयवासीले सामाजिक रुपमा बहिष्कार गरेका छन् । धन्य अर्जुनधाराका स्थानीयवासी । अन्याय र अत्याचारविरुद्ध जुन लड्ने र बोल्ने साहस देखाउनुभएकोमा तपाईंहरुलाई सलाम छ ।
तर, मलाई यतिबेला अचम्म लागिरहेको छ । सभा समारोहमा महिला हिंसाविरुद्ध भएका घटनालाई लिएर चर्को भाषण गर्ने हाम्रा महिला नेतृहरु कहाँ छन् ? किन उनीहरुको आवाज बन्द छ । के एउटी अन्यायमा परेकी महिलालाई न्याय दिलाउनु महिला अधिकारकर्मीको धर्म होइन र ? कि सडकमा आन्दोलन गर्दै र सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्टाउँदै हिँड्ने काम मात्र उनीहरुको हो । यदि त्यही घटना भोलि तपाईंमाथि आइलाग्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? चुपचाप सहेर बस्नुहुन्छ ? होइन भने एउटी अस्मिता आज ससुराको किरिया बार्न घरमा बस्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भइरहँदा तपाईंहरु नबोल्नुका कारणको जवाफ हामी जस्ता सर्वसाधारण महिलालाई पनि चाहिन्छ ।
हुनत हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै कोही महिला अन्यायमा पर्यो भने त्यो कुन जातिकी, धर्मकी र कुन पार्टीकी भन्ने महिला नेतृहरुको ध्यान जान्छ अनि मात्र बोल्ने गरेका घटनाहरु हामी माझ छुपेको छैन । यही कारण दिनानुदिन महिलामाथि बलात्कार, कुटपिट, दुव्र्यवहार र हत्यालगायतका घटनाहरु भइरहेका छन् । अन्यायमा परेको महिलालाई न्याय दिनु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । त्यसैले हामीले फुटेर होइन जुटेर अस्मिताजस्ता सयौँ महिलालाई न्याय दिनुपर्छ ।
अस्मिता यतिबेला धुलाबारीमै बसेर काजकरिया गरिरहँदा समेत यहाँका महिला नेतृहरु दुर्गा खतिवडा, रेणुका डाँगी, मीरा पोखरेल, सीता पोखरेल, नमूना निरौला, कविता शर्मा, सङ्गीता थापा, रुपा खतिवडा, टीका सुवेदी, सरस्वती सिटौला, पुष्पा भण्डारी, लीना भण्डारीलगायतले उनको अवस्था समेत बुझ्न जान नसक्नु लज्जास्पद हो । मेरो अनुरोध छ, कम्तीमा अस्मिता अन्यायमा परेकी छिन् । उनी न्यायको भीख मागिरहेकी छिन् । उनलाई त्यो गौतम परिवारसँगै आफ्नै घरमा बसेर काजकरिया गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि तपाईंहरुको पहल जरुरी छ । उनलाई यतिबेला एक्लो महसुस हुन नदिनका लागि तपार्इं हाम्रो साथ सहयोगको आवश्यकता छ जाऔँ । सहयोग गरौँ । हामी अन्यायविरुद्ध बोल्न डराउनु हुँदैन । अन्याय र अत्याचार गर्नेको पक्षपोषण होइन उनीहरुलाई दण्डित गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो ।